ओलीले मोदीलाई सोधेका थिए, अब नाकाबन्दी लगाउनुहुन्छ कि हुन्न ? | Seto Khabar
ओलीले मोदीलाई सोधेका थिए, अब नाकाबन्दी लगाउनुहुन्छ कि हुन्न ?
काठमाडौँ, चैत्र २६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका अवसरमा भारत सरकारले गरेका रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र जलमार्ग विकासमा सहयोग गर्नेलगायतका घोषणा नेपालको सीमासम्म रेलमार्ग पुर्‍याउने उद्घोष गरेको चीनलाई जवाफ भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्।
‘छिमेकसँगको सम्बन्ध अरूसँग भन्दा फरक हुन्छ । समानता, न्याय, आपसी सम्मानजस्ता सिद्धान्त नै शान्तिपूर्ण छिमेकसँगको सहअस्तित्वपूर्ण सम्बन्धका आधार हुन्,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले लेखेको छ।
ओलीको भारत भ्रमणकै क्रममा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निकट भविष्यमा हुने आफ्नो नेपाल भ्रमणका अवसरमा शिलान्यास गर्ने योजना बनेकाले स्थगन गरिएको विदेश सचिव गोखलेलाई उद्धृत गर्दै उक्त दैनिकले लेखेको छ। यसमा नेपाली टोलीले पनि मौन समर्थन गरेका छन्। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।